ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ဆယျကြျောသကျကစားသမား အနျဆုဖာတီဟာ PSG အသငျးကို နာမညျကြျောကစားသမားဟောငျးမကျဆီ ပွောငျးရှသှေ့ားပွီးတဲ့နောကျ လဈလပျနတေဲ့ ဂန်ထဝငျကြောနံပါတျ(၁၀)ဂြာစီပိုငျရှငျသဈအဖွဈ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ရှေးခယျြသတျမှတျခံခဲ့ရပါတယျ။
ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ (၁၇)နှဈကွာကစားခဲ့သူ မကျဆီဟာ အသငျးနဲ့စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ကိစ်စအဆငျမပွဖွေဈခဲ့တာကွောငျ့ သွဂုတျလအစပိုငျးမှာ ပွငျသဈထိပျသီးကလပျ PSG အသငျးကိုပွောငျးရှခေဲ့ပွီး
ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ဘဏ်ဍာရေးအခကျအခဲတှအေရ မကျဆီနရောမှာအစားထိုးဖို့ ထိပျတနျးကစားသမားတဈဦးချေါယူဖို့ မဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ နံပါတျ(၁၀)ဂြာစီကို အနားပေးလောကျတယျဆိုတဲ့ ခနျ့မှနျးသတငျးတှထှေကျပျေါခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သတငျးတခြို့ကတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ကြောနံပါတျ(၁၀)ပိုငျရှငျသဈအဖွဈ ကျောတငျဟိုကို ပေးဖို့ရှိတယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာ ဘယျသူမှမထငျမှတျလောကျအောငျ အနျဆုဖာတီကို နံပါတျ(၁၀)ဂြာစီပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အသကျ(၁၈)နှဈအရှယျသာရှိသေးတဲ့ အနျဆုဖာတီဟာ လာမာစီယာအကယျဒမီကနထှေကျပျေါခဲ့တဲ့ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး အသငျးအတှကျစတငျပှဲထှကျခှငျ့ရခြိနျမှာပဲ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှပေိုငျဆိုငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၉၊ သွဂုတျလ(၂၅)ရကျတုနျးက ဘကျတဈအသငျးကို (၅-၂)ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့လာလီဂါပှဲမှာ လူစားဝငျအဖွဈ ပထမဆုံးပှဲထှကျခှငျ့ရခဲ့ပွီး
အဲဒီအခြိနျမှာ အနျဆုဖာတီရဲ့အသကျက (၁၆)နှဈ၊ (၂၉၈)ရကျသာရှိသေးလို့ ဗငျ့ဈမာတီနကျဇျ(၁၉၄၁ခုနှဈ)နောကျပိုငျး အသငျးသမိုငျးတဈလြောကျ ဒုတိယမွောကျအသကျအငယျဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနှဈ၊ သွဂုတျလထဲမှာပဲ အိုဆာဆူနာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့လာလီဂါပှဲမှာ ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး အသကျ(၁၆)နှဈ၊ (၃၀၄)ရကျနဲ့ အသငျးသမိုငျးတဈလြောကျ အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးသူ၊ လာလီဂါသမိုငျးမှာ တတိယမွောကျအသကျအငယျဆုံးကစားသမားစတဲ့စံခြိနျတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့တာပါ။
ဒ့ါအပွငျ အနျဆုဖာတီဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးသမိုငျးတဈလြောကျ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ အသကျအငယျဆုံးကစားသမား(၁၆နှဈ၊ ၃၂၁ရကျ)၊ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြောကျ
အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးသူ (၁ရနှဈ၊ ၄ဝရကျ)၊ လာလီဂါပှဲတဈပှဲမှာ (၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့အသကျအငယျဆုံးကစားသမားစတဲ့စံခြိနျတှလေညျး ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါတငျမကဘဲ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ၊ စကျတငျဘာလတုနျးက ယူကရိနျးနဲ့ပှဲမှာ စပိနျအသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ အသကျ(၁၇)နှဈ၊ (၃၁၁)ရကျနဲ့ လကျရှေးစငျအသငျးမှာ အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးသူအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါသေးတယျ။
ဘာစီလိုနာအသငျးက “အနျဆုဖာတီဟာ ရာသီသဈမှာ ကြောနံပါတျသဈဝတျဆငျခှငျ့ရရှိခဲ့ပါပွီ။
အရငျက နံပါတျ(၂၂)၊ (၁၇)တှဝေတျဆငျခဲ့ပွီး အခုအခြိနျမှာ ဂန်ထဝငျကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ မကျဆီ၊ ရျောနယျလျဒငျဟို၊ ရီဗယျလျဒိုတို့ ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ နံပါတျ(၁၀)ဂြာစီကို ဝတျဆငျကစားသှားမှာပါ။
အသကျ(၁၈)နှဈသာရှိသေးပမေယျ့ အနျဆုဖာတီဟာ ဘာစီလိုနာနဲ့စပိနျကစားသမားဘဝမှာ စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှအေမြားကွီး ပိုငျဆိုငျခဲ့ပွီး စံခြိနျမြားစှာပိုငျရှငျကစားသမားတဈဦးဟာ အခုဆိုရငျ ဂန်ထဝငျနံပါတျ(၁၀)ပိုငျရှငျဖွဈလာပါပွီ”လို့ ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပါတယျ။
မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးသမိုငျးမှာ ကြောနံပါတျ(၁၀)ကို နှဈအကွာဆုံးဝတျဆငျကစားခဲ့သူဖွဈခဲ့တဲ့အပွငျ အသငျးလိုကျသာမက တဈဦးခငျြးမှာပါ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနတောကွောငျ့
နံပါတျ(၁၀)ပိုငျရှငျသဈ အနျဆုဖာတီလညျး မကျဆီရဲ့ခွရောကို လိုကျနငျးနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . .
ဘာစီလိုနာရဲ့ဂန္ထဝင်နံပါတ်(၁၀)ကို မထင်မှတ်ဘဲဝတ်ဆင်ခွင့်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ အန်ဆုဖာတီ
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမား အန်ဆုဖာတီဟာ PSG အသင်းကို နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်းမက်ဆီ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတဲ့နောက် လစ်လပ်နေတဲ့ ဂန္ထဝင်ကျောနံပါတ်(၁၀)ဂျာစီပိုင်ရှင်သစ်အဖြစ် အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ (၁၇)နှစ်ကြာကစားခဲ့သူ မက်ဆီဟာ အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် သြဂုတ်လအစပိုင်းမှာ ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲတွေအရ မက်ဆီနေရာမှာအစားထိုးဖို့ ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးခေါ်ယူဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် နံပါတ်(၁၀)ဂျာစီကို အနားပေးလောက်တယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သတင်းတချို့ကတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ကျောနံပါတ်(၁၀)ပိုင်ရှင်သစ်အဖြစ် ကော်တင်ဟိုကို ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာ ဘယ်သူမှမထင်မှတ်လောက်အောင် အန်ဆုဖာတီကို နံပါတ်(၁၀)ဂျာစီပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ အန်ဆုဖာတီဟာ လာမာစီယာအကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက်စတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရချိန်မှာပဲ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉၊ သြဂုတ်လ(၂၅)ရက်တုန်းက ဘက်တစ်အသင်းကို (၅-၂)ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့လာလီဂါပွဲမှာ လူစားဝင်အဖြစ် ပထမဆုံးပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ အန်ဆုဖာတီရဲ့အသက်က (၁၆)နှစ်၊ (၂၉၈)ရက်သာရှိသေးလို့ ဗင့်စ်မာတီနက်ဇ်(၁၉၄၁ခုနှစ်)နောက်ပိုင်း အသင်းသမိုင်းတစ်လျောက် ဒုတိယမြောက်အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနှစ်၊ သြဂုတ်လထဲမှာပဲ အိုဆာဆူနာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့လာလီဂါပွဲမှာ ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး အသက်(၁၆)နှစ်၊ (၃၀၄)ရက်နဲ့ အသင်းသမိုင်းတစ်လျောက် အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူ၊ လာလီဂါသမိုင်းမှာ တတိယမြောက်အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားစတဲ့စံချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒ့ါအပြင် အန်ဆုဖာတီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းသမိုင်းတစ်လျောက် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမား(၁၆နှစ်၊ ၃၂၁ရက်)၊ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျောက် အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူ (၁ရနှစ်၊ ၄ဝရက်)၊ လာလီဂါပွဲတစ်ပွဲမှာ (၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားစတဲ့စံချိန်တွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မကဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၊ စက်တင်ဘာလတုန်းက ယူကရိန်းနဲ့ပွဲမှာ စပိန်အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့် အသက်(၁၇)နှစ်၊ (၃၁၁)ရက်နဲ့ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းက “အန်ဆုဖာတီဟာ ရာသီသစ်မှာ ကျောနံပါတ်သစ်ဝတ်ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ အရင်က နံပါတ်(၂၂)၊ (၁၇)တွေဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာ ဂန္ထဝင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ မက်ဆီ၊ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို၊ ရီဗယ်လ်ဒိုတို့ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ နံပါတ်(၁၀)ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်ကစားသွားမှာပါ။
အသက်(၁၈)နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် အန်ဆုဖာတီဟာ ဘာစီလိုနာနဲ့စပိန်ကစားသမားဘဝမှာ စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေအများကြီး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး စံချိန်များစွာပိုင်ရှင်ကစားသမားတစ်ဦးဟာ အခုဆိုရင် ဂန္ထဝင်နံပါတ်(၁၀)ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပါပြီ”လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းသမိုင်းမှာ ကျောနံပါတ်(၁၀)ကို နှစ်အကြာဆုံးဝတ်ဆင်ကစားခဲ့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် အသင်းလိုက်သာမက တစ်ဦးချင်းမှာပါ အောင်မြင်မှုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေတာကြောင့် နံပါတ်(၁၀)ပိုင်ရှင်သစ် အန်ဆုဖာတီလည်း မက်ဆီရဲ့ခြေရာကို လိုက်နင်းနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . .
အင်ျဂလနျ(၁)နှဈတာအကောငျးဆုံးကစားသမားဆု ဆှတျခူးရရှိခဲ့တဲ့ ကယျလျဗငျဖိလဈ